Ukhenketho lwefektri -FOSHAN KWEENKONZO ZEFANITSHALA CO., LTD
Ifowuni yeFanitshala yeFowuni, Ltd. yasekwa ngo-2012, nto leyo amashishini ifenitshala ofisi mihla enkulu sisebenzisana uphando, uphuhliso, imveliso, kunye neentengiso. Inkampani inemveliso yefektri eseFoshan Xiqiao, emalunga ne-220,000 yeemitha zesikwere.
Emva kweminyaka eliqela yophuhliso, uGoodtone ukhule waba ngaphezulu kwabasebenzi abangama-300. Uluhlu lweemveliso zenkampani luyatshintsha ukusuka kudidi olunye lwefanitshala luye kwicandelo lefanitshala, njengokusebenzisa urhwebo, ukusetyenziswa koluntu, kunye nokusetyenziswa eluntwini, njl.njl. Amandla emveliso omvelisi afikelela kwiziqwenga ezingama-200,000 ngenyanga, ethe ngokuthe chu iba yimodeli yeshishini lesitulo seshishini e-China.
Kule minyaka yangoku, Iifowuni ukuqinisa ulawulo rhoqo, uphumelele inkqubo yolawulo lomgangatho yophicotho kunye nolwazi lwenkqubo yokuqinisekiswa kwemveliso, naye waphumelela uthotho lweembeko, ezinje nge "Guangdong kwiPhondo Ukugcina ikhontrakthi yeShishini elinamaTyala aKhulu", "Ishishini elitsha leTekhnoloji yePhondo laseGuangdong", Impumelelo yeBhaso ”,“ Amashishini akhokelayo eNiche ”,“ Amandla oKhuphiswano aPhezulu angama-50 oShishino lwefanitshala yaseTshayina ”, njl.
Kule mihla, uGoodtone umisele iiofisi ezili-12 kunye nabathengisi abamalunga ne-10,000 kulo lonke elase-China, kwaye bayasebenzisana namashishini efanitshala awaziwayo, ukukhuthaza indlu yonke ukuba iphuhlise ngokudibeneyo. Isabelo sentengiso yasekhaya yamacandelo eGreentone ngaphambili kushishino.
Kwiminyaka yakutshanje, iGoodtone ikhula kwilizwe jikelele kwaye iseke iiarhente zentengiso zaphesheya. Iimveliso zigutyungelwe kumazwe angama-83 nakwimimandla, ikakhulu kuMzantsi-mpuma weAsia, eMzantsi Melika, eYurophu, kuMbindi Mpuma, eUnited Arab Emirates, eMntla Melika nakweminye imimandla. IGoodtone iye yangamandla anyanzelekileyo kwilizwe jikelele ukujikeleza amashishini osihlalo eofisi yeFoshan.
Umbono kaGoodtone "yiba lishishini lenkulungwane, kwaye ube yenye yezona nkampani zefanitshala zibalaseleyo ehlabathini", ekhuthaza bonke abasebenzi ukuba baqhubeke phambili. Ixabiso leGoodtone "ngumThengi kuqala, ukunyaniseka, ubuGcisa, ukuSebenza, Ukuvuza iStriver, uManyano kunye nokuBambisana", ekhokela imigaqo yokusebenza kunye nokuziphatha kwabo bonke abasebenzi.
Usihlalo weOfisi yeOfisi Enye yeefenitshala eziphambili zeofisi ezikhokela phambili eFoshan, China.Igama lethu lelaseUzuo Group Inkampani, ebandakanya: iSitzone, iHuiyu kunye nezinye iintlobo ezintathu, ijolise kwisitulo seOfisi ngaphezulu kweminyaka eli-15. abayili abanjengo: UPeter Horn, uMartin Ballendat njl. Siza kuqhubeka sisebenza kunye nabayili ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.